Seteembar | 2014 | WEEJIDOW
Archive for Seteembar, 2014
War deg deg ah: Dhegayso: Ra’isul Wasaare CabdiWeli oo beeshiisa ku eedeysay inuu galay khiyaano Qaran
Seteembar 30, 2014
WAAJIDPRESS – 30 SEPT 2014:
BEESHA MAREEXAAN AYAA MAANTA GARBAHAAREEY KAGA DHAWAAQDEY IN RA’ISUL WASAARE CABDIWELLI UU GALEY QIYAANO QARAN ISLA MARKAANA UU SI CAD AH UGA SOO HORJEESTEY SHIRKA GARBAHAAREEY, ISAGOO MOWQIF AHAANA SI QALDAN U RAACEY MAAMULKA XOOGA KU HEYSTA KISMAAYO EE AXMED MADOOBE – HOOS KA DHAGEYSO:
KU dhegayso Moobilkaaga
Daawo:Wafdi Balaaran oo Madaxweynaha hogaaminaayo oo Xaj kaxirtay Muqdisho Una dhoofay….
Madaxweynaha oo ay wehliyaan ku xigeenka Ra’isulwasaaraha ahna wasiirka diinta iyo Owqaafta Ridwaan Xersi Maxamed,wasiirka Gaashaandhiga Maxamed Sheekh IYO Taliyihii hore ee Nabadsugida SAMBALOOSHE,
iyo xubno katirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya ayaa waxaa garoonka ku sii sagootiyay gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) iyadoo madaxweynuhu uu casuumaad ka helay dowladda Sucuudiga isagoo gudashada waajibaadka alle kadib kulamo la qaadan doona mas’uuliyiinta dowladda Sucuudiga – hoos ka DAAWO:
Xog: Garoonka Gaalkacyo oo Amisom lagu wareejinayo kadib murankii Galmudug iyo Puntland
Gaalkacyo – Ciidamada AMISOM ayaa hadda Muqdisho kaga dhawaaqey in maalmaha soo socda ay la wareegayaan garoonka diyaardaha CABDULAAHI YUUSUF ee magaalada Galkacayo maadaama ay isku heystaan maamulo dhalin kartana dagaal dhiig ku daata; ayay maanta ku sheegeen shirkii Jaraa’id.
Madaxweynaha Galmudug Cabdi Qaybdid ayaa horey u sheegey iney dacwo ka yihiin dowladda Puntland kadib markii loo diidey isticmaalka garoonka diyaardaha Galkacayo, isaga oo kadibna si kooban garoonka ugu xiray hanjabaad.
Ma cadda, waxa ay Puntland ka dhihi doonto in Garoonka Gaalkacyo lagu wareejiyo Amisom, hase yeeshee waxaa xaqiiq ah in garoonku shaqeyn karin, haddii aan Galmudug la qancin.
War culus: Raisul WASAARAHA OO diidey in uu la fariisto Madaxweyne XASSAN sheekh caawa
Warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay xarunta madaxtooyada Villa Somalia ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in waanwaan iyo isu soo dhaweyn la doonayay in la isugu soo hor fariisiyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’isul wasaare C/weli Sheekh Axmed uu fashil ku dhammaaday caawa.
Sida wararka aan ku helnay Ra’isul wasaaraha oo sheegay in uusan marna la fariisanaynin Xasan Sheekh oo uu sheegay in uu yahay shaqsi aan dooneyn in dalku xasilo, ummadduna ay dowladnimo dhab ah hesho.
Ra’isul wasaaraha ayaa laga soo xigtay inuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh waa nin maskax kale ku shaqeeya tiisa kuma caana-maalo, hadda aad is fahamtaan oo arrin isla meel dhigtaan berri waxaad arkaysaa isagoo arrinkii aad isku ogeydeen mid ka beddelan wata, marka aniga lama fariisanayo Xasan oo ma doonayo inaan la hadlo nin ay dad kale maskax u yihiin.
Ra’isul wasaaraha oo aan sheegin dadka maskaxda u ah madaxweynaha balse laga dhadhansanayay inuu ula jeeday Faarax C/qaadir iyo asxaabtiisa kale ee Damujadiid ayaa gaashaanka u daruuray in uu la fariisto madaxweyne Xasan Sheekh. “Geedkuu gaaro miro haka goosto, waan arkaynaa waxa uu samayn karo, anigana xil doon ma ahi ee xal doon ayaan ahay, haddii xalka aan waayana xilka waan iska dhigayaa oo marna ma doonayo is qabqabsi siyaasadeed iyo shacabka Soomaaliyeed la lug gooyo” ayuu yiri Ra’isul wasaaraha CABDIWELLI.
War deg deg ah: WAXAA Dhintey Safiirkii Soomaaliya u fadhiyey dalka Masar
WAAJIDPRESS – 29 Sept 2014:
Waxaa caawa abaarihii 1:30Am magaalada Qaahira, ee Dalka Masar ku geeriyooday Safiirka Soomaaliyeed ee Wadanka Masar Cabdullaahi Xasan Maxamed oo ku magac dheeraa “Koofi Dheere”
Allah u naxariisto Danjire Koofi Dheere waxaa saakay abaarihii 11:00Am ku soo booday xanuun degdeg ah isagoo horay u qabay cudurada macaanka iyo dhiig karka. Nasiib darro waxa uu galay koomo isagoo loo la caray isbitaal ku yaalla duleedka magaalada madaxda Masar ee Qaahira, hase yeeshee marxuumka tiisii ayaa gashay oo kama kicin xanuunkaa isaga ah.
Waxaa xusid mudan in maanta ay Safaaradda ay hakad galisay dhamaan adeegyadeeda xanuunka Safiirka awgiis, iyadoo la arkaayay muwaadiniin walaac ka muujnaaya xanuunka Safiirka una duceynaya Albaabka Safaaradda hortiisa.
Danijre Cabdullaahi Xasan waxa uu ahaa muwaadin Soomaaliyeed, howl kar ah, oo in badan ka soo shaqeeyay wadankii hooyo. Cabdullahi Xasan waxaa lagu xusuustaa in uu ahaa Danijreyaasha fara ku tiriska ah ee xilka safiirnimo hayay muddo ka badan 30 sano. Taana waxaa la sheegay in ay ka dambeysay maadaama uu ahaa nin shaqadiisa si wacan uga soo baxay oo qof u dhigantaa oo howshiisa qaban karto loo waayay. Allah U naxariisto geeridiisa waxaa aad uga naxay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Wadanka Masar.
Hadda wali lama sheegin goorta iyo meesha uu aaskiisa ka dhici doono, hase ahatee waxaa loo maleynaayaa in sidii dardaarankiisa ahayd lagu aaso Iimeey Bari ee Ismaamulka Soomaaliyeed ee Ethiopia oo ah degmada uu ku dhashay.
Allah u naxariisto Danjiraha, Familkiisa, Xukuumadda iyo Shacabka Soomaaliyeedna Samir haka siiyo.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Masar waxay si gaar ah ugu tacsisyeyneysaa familka Safiirka.
War deg deg ah: Mu’idinkii MASJIDKA BALEDWEYNE oo hadda la toogtey
Seteembar 29, 2014
waxaa goordhweyd toogasho lagu dilay ALLAHA U NAXARIISTO Mu’adinkii Masaajidka Howladaag Agagarka aargada Sheekh Xasan Barsame Boosteejada Baabuurta aada Muqdisho Meel ku dhaw.
Mu’adinka Masaajidka loo magaciisa lagu soo gaabiyey wardi ayaa la sheegayaan in laba nin oo dhalinyaro ah risaas la beegsadeen xili uu isu diyaarinayey aadaanka salaada cishaha ee Waqiga Baladweyne kuwaas oo gudaha ugu galay wardi oo ahaa ruuxii laga sugayey in uu masaajidka ka aadaamo .
Dilka ka dib ayaa dableydii goobta ka baxsadeen mana jirto cid loo qabtay iyo sidoo kale cid aqoon satay dableyda falka toogashada ah geysatay .
Lama oga sababta dilkiisa ka danbeysay mana jirto cid weli sheegatay in ay masuuliyada dilka ay ka dambeeyeen.
Waa toogashadii labaad ee ka dhacda magaalada baladweyne asbuucaan gudihiisa .
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay aad uga xunyihiin falkaan dhacay isla maraana aaysan awoodin in ay sharciga horkeenaan cidii ka danbeysay dilkaan iyo dilal kale oo magaalada ka dhacay
War deg deg ah: Taliyihii Dembi baarista GOBOLKA BANAADIR OO XILKA laga qaadey isla maantana la magacaabey taliye CUSUB
Waxaa xil ka qaadis lagu sameeyay Madaxii Dembi Baarista ee Hay’adda Nabad Suggida ee Gobolka Banaadir Maxamuud Shubaaye, iyadoo uu saamayn ku yeeshay bedelkii uu Madaxweynuhu ku sameeyay Taliyihii hore ee Hay’adda Nabad Suggida Qaranka C/laahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe).
Ninkaan, ayaa waxaa lagu soo bedelay Taliyihii Hay’adda Nabad Suggida ee Degmada Wardhiigley Faysal Yare, kaasoo xilka si buuxdo ula wareegay toddobaadkaan.
Sarkaalkaan, ayaa durbaba isbedel ka hirgeliyay Xarunta Godka Jilacow ee Degmada Boondheere, wuxuuna oodda ka qaaday ilaa 90 ruux oo 6-dii bilood ee ugu dambeysay ku xirnaa Xabsiga Godka Jilacow.
Dadkaan, ayaa waxaa loo heystay eedeymo kala duwan, ha yeeshee uu masuulkaan ku waayay wax cadeymo ah, iyadoona uu dib ugu ogolaaday inay qoysaskoodu ula midoobaan.
Ilo muhiim ah, ayaa WAAJIDPRESS u sheegay in tallaabada xilka looga xayuubiyay Maxamuud Shubaaye, ay ka dambeysay markii lagu soo eedeeyay in uu jirdil u geystay Suxufiyiinta u xiran Dowladda, oo laga wareejiyay Godka Jilacow, loona wareejiyay Xabsiga Dhexe ee Xamar.
Nabad Suggida, ayaa sidoo kale waxay baareysaa in Shubaaye uu madax furasho ku sii daayay iyo in kale, rag looga shakisnaa inay ka tirsanaayeen Ururka Al Shabaab, oo lagu soo qab qabtay hawlgalada ka soconaayo Magaalada Muqdisho.
Xil ka qaadista Shubaaye lagu sameeyay, ayaa waxay ku soo aadeysaa, xilli la hadalhaayo in xilka laga xayuubin doono Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida ee Gobolka Banaadir Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi).
KASHIFAAD:- Qarash laga filaayo Sacuudiga oo arin aan la maleysan ka dhex abuurtay Xasan iyo C/weli – umadii yaa u maqan
Socdaal ay dowladda Sucuudiga qorsheysay inay madaxda dowladda Soomaaliya ku tagaan dalkaas, ayaa is qab-qabsi ka dhex abuuray madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra’iisul Wasaare Cabdi Weli, sida ay xubno ku dhow Villa Somalia ay shaaciyeen.
Labada mas’uul, ayaa midba goonidiis u doonayey inuu u baxo dalka Sacuudiga, oo madaxda dalkaas ay ku casuumtay madaxda Soomaalida.
Loolanka ayaa ku saleysan lacagta la filayo in dowladda Sucuudiga ugu deeqdo Soomaaliya, oo Xasan iyo Cabdi Weli ay labadaba doonayaan inay gacanta ku dhigaan.
Sacuudiga, ayaa ah dalka kaliya ee inta badan lacag kaash ah ama caddaan gacanta u galiya madaxda Soomaalida, taasi oo ay si fudud ku qaadaan karaan, ayada oo aanay cidna kula xisaabtamin ama ogaan, halka dalalka Yurubta ay lacagta ku bixiyaan barnaamijyo, oo aanay toos u siin madaxda Soomaalida.
Sida la xusuusto, lacagta Sacuudiga waa tii isku dirtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya AUN Cabdullahi Yuusuf Axmed iyo ra’iisul wasaare Cali Maxamed Geedi, kadib markii Geedi uu diiday inuu Cabdllahi Yuusuf wax ka siiyo 5 milyan oo dollar oo kaash ahayd oo uu Sucuudiga kasoo qaatay.
Si kastaba, loolanka safarka ayaa waxaa ay u muuqataa in iminka uu ku guuleystay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo ay wararka sheegayaan in socdaalka u bixi doono, sidoo kalena uu soo xajin doono.
Waxaa iminka dalk Sacuudiga ku sgan wasiirka dastuurka iyo garsoorka Faarax C/Qaadir, oo Sacuudiga ka dhaadhiciyey in madaxweynaha iman doono Sacuudiga.
Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee dalka Sacuudiga, Amiir C/casiis Bin C/llaahi Bin C/casiis waxa uu magaalladda Jidda kula kulmay Wasiirka Garsoorka iyo Dastuurka ee dalka Somalia, Faarax C/qaadir Mohamed.
Wakaalladda Wararka Sacuudiga oo aan warkan ka soo xiganay ayaa sheegtay inuu Wasiirka u gudbiyey Dowladda Sacuudiga Farriin Qoraal oo uu Madaxweynaha Dowladda Federalka Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud u diray Boqorka dalka Sacuudiga, Cabdalla Bin C/casiis Al-sacuud.
Inkasta oo Cabdi Weli, uu saaxiib dhow la yahay dalalka deriska iyo UN-ka, waxaa muuqata in dhinaca Carabta uu madaxweyne Xasan xiriir dhow la lee yahay, taasi oo ay ugu wacan tahay Faarax C/Qaadir oo Carabta ku xirnaa inta uusan siyaasadda kusoo biirn.
Lacagta Caddaanka ah ee Sacuudiga laga soo qaadi doono ayaa la filayaa inay wax weyn ka beddesho loolaanka siyaasadeed ee labada hoggaamiye, ayada kooxda Xasan ay awood u yeelan doonto inay bixiyaan lacag badan, oo aan ka iman qasnadda dowladda.
Dhaqanka madaxda Soomaalida, ayaa weli ah mid sidii lagu yaqaan aan iska beddelin, kuna saleysayn lacag kala boob iyo is qab-qabsi iyadoo aan loo nixin shacabka.
DOWLAD GOBOLEEDKA Lixda GOBOL EE KOONFUR GALBEED ayaa soo dhaweysey Shirka GARBAHAAREY
Dowlad Goboleed lixda Gobol ee Koonfurta Soomaaliya ayaa maanta shirka Magaalada Garbahaareey laga qaban qaabinaayo ku tilmaamay midka saxda ah ee aayaha Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo looga tashanaayo.
Fowsi Cabdi Nuur, waa Afhayeenka Maamulka Lixda Gobalk Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxa uu Idaacada Mustaqbal ee Magaalada Muqdisho u sheegay in ka maamul ahaan ay soo dhaweynayaan shirka ka furmaaya Garbahaarey.
“Haa Maamulkeenu waxaa uu u arkaa shirka Garbahaarey mid sax ah, sidoo kale waxaa jira xubno ka tirsan maamulkeena oo jooga, Garbahaarey kana qeyb qaadanaya Shirkaas, waxaan rajo wanaagsan ka qabnaa in ay halkaas kasoo baxaan waxyaabo ay ku qanci doonaan dadka Lixda Gobol” ayuu yiri Afhayeen Fowsi.
Xubnaha ka socda Maamulka lixda Gobol ee ku sugan Magaalada Garbahaareey ayaa wuxuu sheegay inay kulamo kala duwan la qaadanayaan shacabka Gabahaareey si ay uga tashadaan danaha Gobolka.
Shirka ka socda Magaalada Kismaayo iyo kan Garbahaareey ka furmaayo farqiga udhaxeeya ayaa wuxuu ku sheegay inuu yahay midka Garbahaareey inuu yahay midka saxda ah, halka midka Kismaayo ka socdana uu yahay mid aan sax aheyn.
Qaban-qaabada shirka ka furmi raba Magaalada Garbahaareey ayaa ka socota Magaaladaasi, waxaana shirkaasi ka qaybgalaya xubno ka tirsan Xildhibaanada Federaalka Soomaaliya, ganacsato iyo Aqoonyahano Gobolkaasi kasoo jeeda.
Maamulka lixda Gobol ee Koonfurta Soomaaliya ayaa ku doodaayo inay yihiin maamulka saxda ah ee ka jira Gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya.
Raashinka dowlada Imaaraatka carabtu ugu deeqday danyarta oo lagu kala iibsado Suuqyada Muqdisho
Waxaa soo ifbaxaya warar sheegaya in Suuqyada magaalada Muqdisho lagu kala iibsado raashinka ceyriin ee dowlada Imaaraatka Carabtu ugu talo gashay shacabka Soomaaliyeed ee dhibaateysan.
Rag dhalinyaro Soomaali ah oo Dowlada Imaaraatku u wakiilatay maamulka iyo qeybinta Raashinkaas ayaa la sheegay iney ku takri falaan sidii ay doonaana ka yeelaan deeqahaas, ka dib markii ay waayeen cid la xisaabtanta.
Ganacsato Bakhaaro ku leh suuqyada magaalada Muqdisho ayaa la soo sheegayaa in raashiinkaas deeqda ah intiisa badan lagu wareejiyo, iyadoo looga bedesho lacago fara badan oo kumanaan dollar gaaraya.
Wakiiladan Soomaalida ah ayaa la ogaaday iney qeyb yar oo deeqdaas ka mid ah u qeybiyaan dadka masaakiinta kuwaasoo ay ka qaataan sawiro si dadkii u soo dhiibay ay ugu qanciyaan in deeqdii ay soo direen ay gaarsiiyeen meeshii loogu talo galay, iyagoo deeqda inteeda kalena ka iibsada rag ganacsato ah.
Qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan xeryaha ku yaala gudaha iyo hareeraha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in raashiinka ay bixiso dowlada imaaraatka ay arkaan oo kaliya isagoo yaala Suuqyada magaalada.
Arintan ayaa ku soo aadeysa xili qaar ka mid ah gobolada dalka ay ka jiraan abaaro galaaftay nolosha dad iyo duunyo badan ka dib markii ay waayeen cunto iyo biyo, iyadoo deeqdan la iibsanayo haddii si wanaagsan loo maamuli lahaa lana gaarsiin lahaa degaanada ay abaaruhu saameeyeen ay wax badan ka tari laheyd badbaadinta dad badan oo u baahan.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Seteembar, 2014.